Ihe 12 ime mgbe a katọrọ gị
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 4, 2020 Septemba 4, 2020
A ga-akatọ anyị niile n'oge na-adịghị anya. Mgbe ụfọdụ n'ụzọ ziri ezi, oge ụfọdụ ezighi ezi. Mgbe ụfọdụ, nkatọ ndị ọzọ na-ekwu banyere anyị bụ nke obi ọjọọ na nke na-erughịrị mmadụ. Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịchọ ya. Olee ihe anyị na-eme ma ndị mmadụ katọọ anyị? Emebeghị m nke ọma mgbe niile ma m ka na-amụ ihe, mana ndị a bụ ụfọdụ ihe m na-agbalị iche banyere mgbe ndị ọzọ katọrọ m.
Dị ngwa ige ntị. (Jemes 1:19)
Nke a nwere ike isi ike ịme n'ihi na mmetụta uche anyị na-ebilite ma uche anyị amalite iche echiche nke ụzọ iji gbaghaa onye nke ọzọ. Njikere ịnụ ihe pụtara na anyị ga-agbalịrị ige ntị na ịtụle ihe onye nke ọzọ na-ekwu. Anyị anaghị ehichapụ ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ bụ ezighi ezi ma ọ bụ ekwesighi.
Mee ngwa ikwu okwu (James 1:19).
Etinyela ọnụ ma ọ bụ zaghachi ọsọsọ. Ha ka ha mechaa. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ọsọ ọsọ ị nwere ike ikwu okwu ọkụ ọkụ ma ọ bụ iwe.
Adịla iwe iwe.
N'ihi gịnị? N'ihi na Jemes 1: 19-20 na-ekwu na iwe mmadụ adịghị amịpụta ezi omume Chineke. Iwe agaghị eme ka mmadụ mee ihe ziri ezi. Cheta, Chineke adighi-ewe iwe oso, o nwere ogologo ntachi obi n'ebe ndi mejoro ya nọ. Ego ole ka anyị kwesịrị ịbụ.
Ejila azụ azụ.
“Mgbe (Jizọs) bụ onye a kparịrị, ọ dịghị ekwujọgwara; mgbe ọ tara ahụhụ, o yighị egwu, kama ọ gara n'ihu ịdabere na Onye ahụ nke na-ekpe ikpe n'ezi omume ”(1 Pita 2:23). N'ikwu okwu banyere ebubo ebubo na-ezighị ezi: Jizọs bụ, mana ọ gara n'ihu ịtụkwasị obi na Onyenwe anyị ma ọ bụghị mkparị na nkwụghachi.
Nye azịza ọma.
“Azịza dị ụtọ na-eme ka iwe dajụọ” (Ilu 15: 1). Nwe-kwa-nu obi-ọma megide ndi mejọrọ gi, dika Chineke nwere obi-ọma n’aru ayi ma ayi mejọọ ya.
Agbachitere onwe gị ngwa ngwa.
Nchebe nwere ike ibili site na nganga na enweghị ike ịchọta ya.
Chee echiche ihe nwere ike ịbụ eziokwu ma a katọọ gị, ọ bụrụgodị na e nyeghị ya nke ọma.
Ọbụna ma ọ bụrụ na e nyere ya na ebumnuche imejọ ma ọ bụ ịkwa emo, a ka nwere ihe bara uru ịtụle. Chineke nwere ike isi n’aka onye a gwa gi okwu.
Otu onye kwuru na ndị mmadụ agaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara anyị na Cross ekwughi na karịa, ya bụ, anyị bụ ndị mmehie kwesiri ntaramahụhụ ebighị ebi. Yabụ, n’ezie, ihe ọbụla mmadụ kwuru gbasara anyị pere mpe karịa ihe Cross kwuru banyere anyị. Chigharịkwuru Chineke onye na-anabata gị n'ime Kraịst n'agbanyeghị oke mmehie gị na ọdịda gị. Anyị nwere ike ịda mbà mgbe anyị hụrụ mpaghara nke mmehie ma ọ bụ ọdịda, mana Jizọs kwụrụ ụgwọ maka ndị nọ na obe na Chineke nwere obi ụtọ na anyị n'ihi Kraịst.
Tụlee eziokwu ahụ bụ na ị nwere ntụpọ ìsì
Anyị enweghị ike ịhụ onwe anyị mgbe niile. Ikekwe onye a na-ahụ ihe banyere onwe gị nke ị na-apụghị ịhụ.
Kpee ekpere maka nkatọ
Rịọ Chineke maka amamihe: “M ga-ezikwa gị ihe ma zikwa gị ụzọ ị ga-eso; M ga-adụ gị ọdụ, anya m ga-adị n'ebe ị nọ ”(Abụ Ọma 32: 8).
Jụọ ndị ọzọ ka ha kwuo uche ha
Onye nkatọ gị nwere ike ịbụ nke ziri ezi ma ọ bụ kpamkpam na igbe. Ọ bụrụ na nke a bụ mpaghara nke mmehie ma ọ bụ adịghị ike na ndụ gị, ndị ọzọ ga-ahụkwa ya.
Tụlee isi mmalite ya.
Emela nke a ọsọ ọsọ, mana tụlee mkpali ndị ọzọ nwere ike ime, ogo ha ma ọ bụ amamihe ha, wdg. O nwere ike ịkatọ gị maka imejọ gị ma ọ bụ ọ nwere ike ọ maghị ihe ọ na-ekwu.
Nke gara aga Post Gara aga post:Lọ arụsị dị na Mexico bụ nke e mere ka e cheta ụmụaka afọ ime
Next Post → Post ozo:Gosiputa taa na igba mgba nke gi